“ငါတို့တသက်ယုံကြည်ချက်” နိူးဆော်လွှာ (မြ၀တီ ရဲခေါင်) ~ Nge Naing
Wednesday, October 14, 2009 Nge Naing 36 comments
Posted in: မြ၀တီ ရဲခေါင်,နိုးဆော်လွှာ
များပြားလိုက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ၊ အဘ ဦးရဲခေါင်က အတော်လေး စိစိပေါက်ပေါက် ထောက်ပြပြီး ရေးသွားနိုင်လိုက်တာ ။
ဒီလို အားလုံး ပြီးပြည့်စုံ လာရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲနော် .. .. ..
အဲ့ ဒီ တနေ့ နေ့တချိန်ချိန်ကို ၊
မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့မျှော်နေကြဆဲပါ မငယ်နိုင်ရေ ...
October 14, 2009 at 10:08 PM Reply
ဒီစာမျိုးကို လိုရင်းတိုရှင်း ထပ်ချုပ်ပြီး မြန်မာပြည်က လူထုကြားထဲ ပျံ့နှံ့အောင်လုပ်နိုင်ရင်
ပြည်တွင်းကအင်အားက အဓိကပဲ။ တနိုင်တပိုင် ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ပိုစ့်အဖြစ်နဲ့ကျတော့ ဖတ်နိုင်တဲ့ လူကသိပ်မများဘူး။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကလဲ အမြဲ စောင့်ကြည့်နေသူတွေရှိတော့ လူတွေက ပေါ်တင်မဖတ်ရဲဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကအစပဲ။ စာအဖြစ်ဖြန့်ဝေနိုင်ရင်ဖြစ်စေ၊
ရင်းနှီးတဲ့ သူအချင်းချင်းဖြစ်စေ စည်းရုံးနိုင်မှ ပိုမြန်မယ်အမ။ အခုပဲ ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၀၀၉ကုန်တော့မယ်။ စည်းရုံးရေးကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ပဲ တဦးစ၊ နှစ်ဦးစ စွန့်စားရတာ နယ်ရုပ်လေးတွေ အလကားထိုးကျွေးနေသလိုပဲ
October 14, 2009 at 11:46 PM Reply
Kiki ရေ- အဘက အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ မွေး အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ ကြီးခဲ့ပြီး ခေတ်တွေ အားလုံးကို မီခဲ့သူဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆီက အာဏာနဲ့ ပြည်သူတွေဆီကလည်း ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဓါးမြတိုက်ယူခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကနေ အဏာရှင် စနစ်ကို နေ့ချင်းညချင်း ကူးပြောင်းသွားတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြောင့် အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲ မွေးပြီး ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့ထက် သူ့မှာ ခံစားချက် ပိုများပြီး ပြောစရာ ပိုများမှာ သေချာပါတယ်။
အမည်မသိရေ- အကြံပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း လက်လှမ်းမီသလောက်သာ တဆင့် ပြန်တင်ပေးနိုင်ပြီး ဒါတွေကို ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ဘယ်လောက်မှ ထိရောက်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိပေယ့်လည်း ဒီ Message တွေကို အခု အမည်မသိလို တယောက် သိရင်လည်း တယောက်အဖို့ အမိမြန်မာပြည်မှာ တခြားကမ္ဘာနဲ့ မတူပဲ ဖြစ်ပျက်နေတာကို စဉ်းစား ချင့်ချိန် အဖြေရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
October 15, 2009 at 1:53 AM Reply
တကယ်လည်းဖြစ်ပျက်နေပြီ တကယ်လည်းလိုအပ်နေတာတွေပါလားနော်... တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး က ကြီးကနေ ပြန်စမှရမယ်ထင်တယ်...
တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ post ၁ခုပါ
October 15, 2009 at 4:06 AM Reply
အမရေ စာလာဖတ်သွားတယ်။တလခွင့်ပြန်ဦးမယ်။လာနှုတ်ဆက်တာပါ။နောက်လမှ အမ စာတွေ တဝလာဖတ်မယ်ဗျာ။ပျော်ရွှင်ပါစေ အမရေ။ကျွန်တော် စာအသစ်တွေ ရေးထားခဲ့သေးတယ်။
October 15, 2009 at 5:42 AM Reply
အားမလျော့စေချင်တဲ့အတွက် အားပေးနေပါကြောင်း အဘနဲ့ တွေ့ရင်ပြောပေးပါ...
October 15, 2009 at 4:31 PM Reply
ပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက် ပေးသွားသူတွေကိုရော ကျွန်မကို နှုတ်ဆက်သွားသူတွေ အားလုံးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တင်ထားတဲ့ပို့စ်နဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကျွန်မ Print ထုတ်ပြီး အဘကို သွားပေးတဲ့အတွက် Message အားလုံး သူ့ဆီကို ရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တကယ်လို့ မရှင်းလင်းတာရှိလို့ မေးခွန်းမေးချင် ရင်လည်း ဘယ်သူမဆို မေးလို့ရပါတယ်။
ကျွန်မလည်း ငွေစက္ကူမဟုတ်ပဲ ရွှေစက္ကူ ဖြစ်နေတာကို မေးပါတယ်။ သူပြန်ရှင်းပြတာက အခုခေတ် ပိုက်ဆံက ဘာမှအာမခံမထားပဲ စက္ကူရွက်တွေကို စက်က ထုတ်ချင်သလို ထုတ်နေလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ သက္ကူရွှက်တွေ ဖြစ်ပေမယ့် ၆၂ စစ်တပ် အာဏာမသိမ်းခင်က မြန်မာငွေကတော့ ထုတ်တဲ့ ပိုက်ဆံတန်ဖိုးနဲ့ ညီတဲ့ ရွှေပေါင်တင်ပြီးမှ ပိုက်ဆံကို စက်က ရိုက်ထုတ်ရလို့ ဒီမိုကရေစီခေတ်က မြန်မာပိုက်ဆံဟာ သိပ်ပြီးတန်ဖိုးကြီးလို့ ရွှေစက္ကူတွေ ဖြစ်တယ် ငွေစက္ကူ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။
March 30, 2010 at 12:03 PM Reply
ဒီပိုစ့်လေးကို အခုမှ ဖတ်ရတာ မမ။ အဘက ခေတ်သုံးခေတ်ကို မှီပြီး ခေတ် စနစ်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတော့ ရေးထားတဲ့ ယုံကြည့်ချက်တွေကလည်း လေးစားဖွယ်ပဲ မမရေ...။
March 30, 2010 at 12:16 PM Reply
We wanna read his expereinces and historical facts abt Burma.
March 30, 2010 at 3:36 PM Reply
March 30, 2010 at 6:42 PM Reply
March 31, 2010 at 6:34 PM Reply
April 1, 2010 at 4:17 AM Reply
စေ့စပ်သေချာစွာ လိုအပ်ချက် မှန်သမျှကို မှတ်တမ်းပြု ရေးသားထားတဲ့ မြ၀တီ (ဦး)ရဲခေါင်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိသလို တစ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ မငယ်နိုင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းကို ပျံ့နှံ့စွာ ရောက်စေချင်ရင် လောလောဆယ် လုပ်ပေးနိုင်တာကို ပြောရင်ချင် တတ်နိုင်သမျှ အီးမေးလ်နဲ့ ဆင့်ပွား ပို့ပေးခြင်းပါပဲ။
လောလောဆယ် ကျွန်တော် Word file အနေနဲ့ သိမ်းထားပါတယ်။
မငယ်နိုင်ခွင့်ပြုရင် ကျွန်တော် အီးမေးလ်နဲ့ စဖြန့်ချင်ပါတယ်။
November 14, 2010 at 7:30 PM Reply
Thank you very much for your attention on this article. You have good idea. You can share or distiboute this article as whatever you prefer. Sorry I can't type Burmese in this computer.
November 15, 2010 at 8:14 AM Reply
စကားမစပ် ကျွန်တော့်နာမည် Lun Lunn ပါ။ Lan Lann မဟုတ်ပါ။ ကွန့်မန် တစ်ချို့မှာ Lan Lann လို့ ပြန်ထားတာတွေ့လို့။
November 17, 2010 at 8:27 AM Reply
တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးကြပါဆိုတော့ . . . ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မြအေးသမီး ဒုတိယဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ အားမပေးကြတော့ဘူးလား? တော်တော်ကို အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့သူတွေပဲ။ ဟိုကဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို ၅ မိနစ်ကြီးတောင် မိန့်ခွန်းပြောထားရတာ။ မင်းတို့ပဲ ဒုတိယဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ပြောခဲ့တာပဲ။ သူ့ကြောင့် မြန်မာလူငယ်တွေ နိုင်ငံရေး အသိပွင့်လင်းလာတယ်လေး ဘာလေးနဲ့။ အခုမှ အချိုးတွေပြောင်းကုန်တယ်။
March 28, 2011 at 8:15 PM Reply
အစ်မရေ ကျွန်တော် ( မြ၀တီ ) ဦးရဲခေါင်နဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ချင်ပါတယ်... သူနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ... ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာ သိရင် တစိတ်လောက် ပြောပြပေးပါနော်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အဘ ဦးရဲခေါင် နေမကောင်းဘူး။ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဒီအထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ngenaing2008@gmail.com ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးထားပါ။ ကျွန်မ ဖုန်းနံပါတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်။
July 2, 2011 at 9:27 PM Reply
အားလုံးက နှစ်ခါတင်မှ ဖတ်ဖြစ်ကြတာ
နောက်ထပ် အဟောင်းတွေ ပြန်ပြီး အသစ်လုပ်ပါအုံး
ဓားမဝတီ မဲပြောင် says:
July 3, 2011 at 5:31 AM Reply
တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားပေးခဲ.တာ ၂၃ နှစ်ရှိပါပြီ ဘာမှမထူးလို.စိတ်ညစ်နေပါတယ် ဘယ်တော.ထူးမှာလဲပြောပြပါ
တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါ (၁) says:
July 3, 2011 at 9:48 AM Reply
တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါ (၁)
မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်မှန်စွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေလိုလျှင် တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ အရပ်ဘက်အမြင်နှင့် ကြည့်မှ တကယ့် ပြည်သူကို မြင်ပါလိမ့်မည်။
အသစ် တက်လာသည့် သမ္မတကြီးသည် အရပ်ဘက်မှ လာသောလူ မဟုတ်ပါ။ စစ်တပ်မှလာသော လူတဦး ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ် ဆိုသည်မှာ အရာရာတိုင်းကို ရှုမြင်ရာတွင် တသွေး၊ တသံ၊ တမိန့် ဖြင့်သာ ရှုမြင်လေ့ ရှိပါသည်။ ခေါင်းဆောင်က မှားလည်း ပြန်ပြောခွင့်မရှိ၊ စောဒကတက်နိုင်ခွင့် မရှိပေ။
ခေါင်းဆောင်ခိုင်းသည့် အမိန့်အတိုင်းသာ လုပ်ရသည်။ အမှားအမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားခွင့် မရှိပေ။ စစ်သင်တန်း တက်ကတည်းက brain wash လုပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်၍ စီနီယာသမားကိုပင် ဂျူနီယာသမားက ပြန်လှန် မေးခွန်းထုတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပေ။ စစ်တပ်သည် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်၍ စစ်တပ်အတွင်း ဤစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်မှာ မမှားဟု ဆိုနိင်သော်လည်း အရပ်ဘက်ပြည်သူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမည် ဆိုပါက ဤလမ်းစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်၍ မရပေ။
တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါ (၂) says:
July 3, 2011 at 9:53 AM Reply
တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါ (၂)
"ယခုအခါ နိုင်ငံတော်ကို ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းနေပါသည်" ဆိုသော တပ်အမြင်ကို လုံးဝ စွန့်လွှတ်ရပေလိမ့်မည်။
ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရမှာ အတွေးအမြင် ဘောင်ခတ် စည်းခြားထားခြင်း မရှိ၊ လူထုအား ဖြန့်ကျက် တွေးခေါ်နိုင်ခွင့်ကို ပေးရမည်။ လူထုအမြင်သည် အခရာ ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပြည်သူလူထုဆီမှ သက်ဆင်းသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ လူထု၏အမြင်ကို လွတ်လပ်ခွင့် ပေးရမည်၊ လူထု၏အသံကို နားထောင်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်။
"အစိုးရကို ဝေဖန်ရင် ငါ့ ရန်သူ" ဟူသော အစွဲကို ဖျောက်ရပေလိမ့်မည်။ တပ်အမြင်နှင့်ကြည့်၍ မရ၊ အရပ်ဘက်အမြင်ဘက်က ကြည့်လျှင် ဝေဖန်တိုင်း ရန်သူမဟုတ်။ တော်လှန်တိုင်း ရန်သူမဟုတ်၊ သူတို့လည်း တိုင်းပြည်ကိုချစ်၍ နိုင်ငံရေးစကား ပြောခြင်း၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
သူတို့လဲ တိုင်းပြည်ကိုချစ်၍ နိုင်ငံရေးလုပ်သည်၊ နိုင်ငံရေးစကား ပြောသည်။
ငါတို့အစိုးရလဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်၍ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သည်။ ချစ်၍လုပ်တာချင်း အတူတူ "ငါတို့လုပ်မှ အမှန်၊ မင်းတို့လုပ်လျှင်အမှား" ဆိုသော အယူအဆမျိုး မထားသင့်ပေ။ "ငါတို့သည် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား မဟုတ်၊ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား အစစ်အမှန်သည် ပြည်သူလူထုသာဖြစ်သည်၊ ပြည်သူ ခိုင်းလို့ လုပ်ရသည်၊ ပြည်သူ ကျွေးလို့ စားရသည်၊ ပြည်သူကြောင့်သာ ရပ်တည်ရသည်၊ ပြည်သူ့ ဝန်ကို ထမ်းလို့သာ ပြည်သူ့  ဝန်ထမ်း ဖြစ်ရသည်" ဆိုသော အတွေးမျိုးကို ခေါင်းထဲ ထည့်ထားရပေမည်။
ဤကား အရပ်ဘက်အမြင်ဘက်က ကြည့်မှသာ မြင်ပေလိမ့်မည်။
တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါ (၃) says:
July 3, 2011 at 9:55 AM Reply
တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါ (၃)
တပ်အမြင်နှင့်ကြည့်လျှင် ဒေါ်စုကို ရန်သူဟု သတ်မှတ်နေလိမ့်မည်၊ အရပ်ဘက်အမြင်နှင့် ကြည့်လျှင် ဒေါ်စုသည် နိုင်ငံ့အကျိုး၊ ပြည်သူ့ ကောင်းကျိုးကို လိုလားသူဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ အတွက် သူမ၏ အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို စွန့်ဝံ့သူ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းကျ ခံဝံ့သူ၊ ထို.ကြောင့် ပြည်သူ့ အချစ်တော် ဖြစ်ပေတော့သည်။
တပ်အမြင်နှင့်ကြည့်လျှင် ကျောင်းသားသည်ရန်သူ၊ အရပ်ဘက်အမြင်နှင့် ကြည့်လျှင် နိုင်ငံတော်အတွက် ပညာရေးကို စွန့်ဝံ့သူ၊ ပြည်သူ့ အတွက် မိမိတို့ ဘဝတက်လမ်းကို ထားခဲ့သူ၊ မိဘပြည်သူအတွက် တဘက်တလမ်းမှ အကူအညီပေးလိုသူ၊ ဒါကြောင့် ပြည်သူ့ အချစ်တော်ကျောင်းသား ဖြစ်ပေတော့သည်။
တပ်အမြင်နှင့်ကြည့်လျှင် သာသနာဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်းတွေသည် ရဟန်းအကျင့်ကို မကျင့်ပဲ လူတွေရဲ.အကျိုးကို လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ရန်သူ၊ အရပ်ဘက်အမြင်နှင့် ကြည့်လျှင် သံသရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကို အေးအေးလူလူ အားမထုတ်နိုင်ရှာသေးပဲ ဒကာ၊ ဒကာမတို့၏ စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်းများ သက်သာရန်အလို့ငှာ မိမိတို့ သံသရာမှ လွတ်မြောက်မှုကို မရှာဖွေနိုင်သေးပဲ အများသူငါတို့ပါ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးပမ်းကြရှာသောကြောင့် ပြည်သူတို့ ၏ အချစ်တော် ဘုန်းဘုန်းများ ဖြစ်ပေတော့သည်။
တပ်၏အမြင်ကား "ငါလုပ်မှ ရမည်" ဟူသော အမြင်သက်သက်တည်း။
အရပ်ဘက်အမြင်ကား "ပြည်သူအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်မှ ရမည်" ဟူသော အမြင်တည်း။
တပ်အမြင်နှင့်ကြည့်သော် ချမ်းသာနေသော လက်တဆုပ်စာ လူတန်းစားလောက်ကိုသာ မြင်ပါလိမ့်မည်။ အရပ်ဘက်အမြင်နှင့် ကြည့်သော် အခြေခံလူများစု၏ ဘဝရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရပုံကိုသာ မြင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် တပ်အမြင်နှင့် မကြည့်ပဲ အရပ်ဘက်အမြင်နှင့် ကြည့်ပါလို့ အစိုးရသစ်ကို ပြောပါရစေ။
(ဒေါင်းမာန်ဟုန်ဘလော့မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
July 3, 2011 at 5:57 PM Reply
July 3, 2011 at 6:13 PM Reply
ပြည်သူလူထုကြီး ခင်ညား ဘာမှပူနဲ.နော်.....အနော်တို.တတွေ တိုက်ပွဲဝင်ဖို.....ပြင်နေပါတယ်။အစည်းအဝေးတွေထိုင်နေပါတယ်။
ဖယောင်းတိုင်တွေထွန်းနေပါတယ်။ လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနေပါတယ်။မီဒီယာပေါ်ကနေ၀ါဒဖြန်.ပီး စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး
နေ.စဉ်မပြတ် အနဲဆုံး ၉ ထောင် ၁ သောင်းကြားဖွဲ.နေပါတယ်။
ရံဖန်ရံခါ စိတ်အလိုမကျတဲ.အခါလဲ ဆဲနေပါတယ်။
ဆေးရုံမသွားခင်လေး ပြည်တွင်းက လူထုကြီးကို အနည်းငယ်မှာ ခဲ.ပါရစေ....မကြောက်ကြပါနဲ.
ကိုယ်.အခွင်.အရေးကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှရမှာပါ....။။။လူထုရဲ.တာဝန်က အလှူငွေပေးဖို.နဲ..
အားလုံးအဆင်ပြေတဲ. တနေ. ပ၀ါနှစ အသာချလို. မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာပီး လမ်းညွှန်ဦးဆောင်ပေးပါမယ်လို.
ရဲရဲကြောက် ရဲရဲပျောက် ရဲရဲမြှောက် အားလုံးရဲ.ကိုယ်စား ကြောင်ချေးက ဒီနေရာကနေ ရဲရဲကြီး
အသက်ကလေးရယ်တဲ.ရှည်စေလို ကျည်လွတ်မြေကိုခို ( ပုန်းအောင်းခြင်းမဟုတ် အကာအကွယ်ယူခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။)
ကြောင်ချေး ( ၆ ယောက် ၃တန်း ပါလေရာ )
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ပေါင်း စုံ
အရေးတော်ပုံ.......................................ဘယ်သောအခါ...။။။သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
July 3, 2011 at 10:14 PM Reply
July 3, 2011 at 10:16 PM Reply
စစ်တပ် ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင် ပစ်တယ် says:
July 3, 2011 at 10:19 PM Reply
July 3, 2011 at 10:21 PM Reply
July 17, 2011 at 2:20 PM Reply
လူအစုအပြုံလိုက် သတ်ခဲ့တဲ့ တင်အောင်မြင့်ဦးကို ကုလ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့ပြီး စစ်ဆေးသင့်တယ်
July 17, 2011 at 2:21 PM Reply
July 17, 2011 at 2:22 PM Reply